Fri, Jul 10, 2020 at 6:24pm
बिहिवार, १९ भाद्र २०७६,	- आहा खबर संवाददाता .	4.81K
लामो समयदेखि अध्यापन क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आउनुभएका साहित्यकार टी.एन. भट्ट ‘विश्वामित्र’ को प्रतिक्षित उपन्यास ‘डेड सुक्रबिर’ विहिबार एक भब्य कार्यक्रमबीच लोकार्पण गरिएको छ ।
यसअघि पनि विविध साहित्यिक विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएका विश्वामित्रद्वारा लिखित ‘डेड सुक्रबिर’ को कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीले लोकार्पण गर्नुभयो । पुस्तकको प्रकाशक शिखा बुकका कार्यकारी निर्देशक पुष्पराज पौडेलको सभापतित्वमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा कैयौं वक्ताहरुले उपन्यास ‘डेड सुक्रबिर’ का बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा डा. नवराज लम्साल, उत्तम पौडेल, डा. प्रदिप कुमार मैनाली, शान्ति शर्मा, रविन्द्र आशिष शैली लगायतका अन्य थुप्रै साहित्यकारहरुको बाक्लो उपस्थिती थियो ।
बिल्कुलै नयाँ सन्दर्भ
हुन त उपन्यासको नाम नै केही अनौठो खालको सुनिन्छ । यस विषयमा प्रकाश पार्दै लेखक ‘विश्वामित्र’ ले आहा खबरसँग भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्थामा हाम्रो समाजलाई महाभारतको कृष्ण जस्तै एउटा सर्वज्ञ चरित्रको खाँचो छ ।
समाजलाई एउटा सक्षम पात्र चाहिएकाले हरेकलाई झक्झक्याउनका लागि धेरै सोंचेर यो नाम राखिएको हो ।” उहाँले थप्नुभयो “मेरो उपन्यासमा बन्दुक समाइसकेकी एउटी नारी पनि समाज उत्थानका लागि कसरी तम्तयार हुन्छिन् भन्ने कुरालाई प्रधानताकासाथ देखाएको छु । पुस्तकको माध्यमबाट समाजमा नयाँ जागरण पैदा गर्नु नै मेरो प्रयास हो ।”
उपन्यास कस्तो छ ?
पुस्तकको विषयवस्तु निकै रोचक समेत छ । जहाँ मञ्जिल र मानवी भन्ने दुई प्रमुख पात्र छन् । देशमा १ दशक बढी लामो समयसम्म चलेको जनयुद्धको विषय पनि छ ।
उपन्यासकी एक पात्र मानवी सोही जनयुद्धमा लागेकी समेत हुन्छिन् । यहाँसम्म की लाउँला खाउँला भन्ने रहरलाग्दो उमेरमै उनी देश परिवर्तनका लागि भन्दै युद्धमा होम्मिएकी हुन्छिन् । यहाँसम्म की जवान मानवीका कलिला हातहरुले बन्दुक र बारुद समेत खेलाइसकेको हुन्छ ।
जसै जनयुद्ध सकिन्छ तब क्रान्तिकारी सोच समेत सेलाउँदै जान्छ । सोही क्रममा उनको वर्षौ पुरानो प्रेमी मञ्जिलसँग भेट हुन्छ ।
कालान्तरमा मानवी र मञ्जिल समाजका लागि एउटा आदर्श पात्र दिने मनसायले अघि बढ्दछन् । एक नववालकलाई जन्म दिनका लागि पुरुष र महिलाको बीचमा शारिरिक समागम अपरिहार्य हुने भएता पनि मञ्जिललाई आफ्नै वीर्य अर्थात् शुक्रकीटमाथि नै शंका पैदा हुन्छ र उ सकेसम्म त्यस कर्मबाट पन्छिन चाहन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो समाजलाई महाभारतको कृष्ण जस्तै एउटा सर्वज्ञ चरित्रको खाँचो छ । समाजलाई एउटा सक्षम पात्र चाहिएकाले हरेकलाई झक्झक्याउनका लागि धेरै सोंचेर यो नाम राखिएको हो ।
यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पनि जनयुद्ध लडिसकेकी मानवीले कसरी कथालाई अघि बढाउँछिन् भनेर जान्न हरेक पाठक उत्सुक हुन्छन् ।
समग्रमा उपन्यासले समाजमा ज्युँदो शुक्रकीट बाँकी नै रहेको भन्दै आफ्ना पाठकलाई आशावादी हुन आग्रह समेत गर्छ । उपन्यासमा लेखकले निकै चलाखीपूर्वक प्रयोग गरेका कैयौं बिम्बहरुले पाठकमा नयाँ उत्साहसमेत जगाइदिन्छ । केही समालोचकको भनाईलाई मान्ने हो भने उपन्यास युवाका लागि समेत प्रेरणादायी छ । त्यस्तै, सिरियस पाठकको मनमा समेत उपन्यासको विषयवस्तुले तरंग पैदा गरिदिन्छ ।